Çin'in Saatte 1000 Km Hıza Ulaşan Maglev Trenleri 2020'de Hizmete Girecek - RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA86 ChinaFiaran-dalamby Maglev any Chine hanatratra 1000 Km Per Hour halefa eny amin'ny 2020
Fiaran-dalamby Maglev any Chine hanatratra 1000 Km Per Hour halefa eny amin'ny 2020
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Fast train, Headline 0
Ireo fiaran-dalamby izay mahatratra ny hafainganam-pandeha km dia ampidirina am-panompoana
Androany, izay misy fiaran-dalamby haingam-pandeha, dia manohy miasa tsy an-kijanona i Shina ho an'ireo lamasinina maglev izay nampidirina ny prototype tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'izany toe-javatra izany, ny fitsapana voalohany dia hatao amin'ny fanombohan'ny 2020.
Sina dia firenena iray feno haingam-pandeha amin'ny resaka fitaterana an-dalamby foana i Shina. Amin'izao fotoana izao, ny firenena dia efa an-trano ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby haingana indrindra eto an-tany ary miomana hitondra fiara fitaterana mankany amin'ny haavon'ny sarimihetsika foronina amin'ny siansa mampiasa ny tanjaky ny angovo mahery vaika.
Ny tatitra vao haingana dia nilaza fa hapetraka ny goule maglev any amin'ireo faritany afovoan'i Shina, izay efa niomana tato anatin'ny taona vitsivitsy, nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona manaraka. Raha ny tatitra dia manao fanadihadiana azo atao ny manam-pahefana mba hananganana ilay tetikasa.
Raha mifanaraka amin'ny drafitra ny zava-drehetra, dia ny lakana avy any Guangzhou, China mankany Beijing dia azo atao amin'ny hafainganam-pandehanana eo anelanelan'ny 600 km sy 1.000 km isan'ora, izay midika fa ny ambony haingam-pandeha lavitra izay misy dia ho ambony lavitra noho ny 350 km / h. Ankoatra izany, ny Asia Times dia nilaza fa, ny fitsangatsanganana 2.200-km avy any Wuhan mankany Guangzhou dia azo nihena roa ora teo.
Ireo lamasinina Maglev, izay mandray ny angovo rehetra amin'ny alàlan'ny cushion an'habakabaka, mampihena ny fiparitahana ary saika hahatratra ny hafainganam-pandeha izay tsy vitan'ny taloha. Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny lamasinina maglev izay miasa any Chine amin'izao fotoana izao dia 430 kilometatra isan'ora. Na izany aza, miaraka amin'ny haitao havaozina, ireo hafainganana ireo dia tokony hahatratra ny 600 mankany 1.000 kilometatra isan'ora.
Raha dinihina ny velarantany shina dia azo lazaina fa ny tanàna lavitra be. Noho izany, ireo lamasinina miasa miaraka amin'ity teknôlôjia ity dia manamboatra ny elanelan'ny tanàna tsy misy dikany ary saika mitondra azy ireo ho amin'ny haavony izay afaka mifaninana amin'ny fiaramanidina.
Tsy i Shina irery no firenena mahaliana amin'ny lamasinina maglev, fa i Japana efa fantatra fa miasa amin'ny lamasinina maglev. Na izany aza, ny fanambaràna farany dia nanondro fa i Alemana sy Etazonia dia miasa amin'ny dikan-dalamby maglev azy ireo ihany. (Webtekno)
Ny Super-Fast Train ao Shina Taranja 1000 Mileage Per Hour | lamasinina 30 / 11 / 2012 Ny Super-Fast Train ao Shina Taranja 1000 Mileage Per Hour | Ny Magl Economy dia mandray fiaran-dalamby haingana tokoa ao amin'ny Shinoa mitombo. Ny tanjona ao amin'ny firenena dia ny hanitatra ny tambajotra mandra-pahatongan'ny 2020 ary hampitombo ny haavon'ny 1000 km Ny herinaratra dia iray amin'ireo teknolojia hafa eto an-tany, indrindra amin'ny fandotoana ny tontolo iainana. Isan-taona dia maro ny orinasa mamokatra sy mampiditra modely elektrôzika na hybrid. Na izany aza, misy ihany koa ireo olana ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra izay tsy voavaha amin'ny herinaratra. Tahaka ny fetran'ny fifamoivoizana sy haingana. Noho izany, ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia mikaroka rafitra lamasinina izay afaka mandrakotra lavitra lavitra ary tsy mijanona amin'ny fifamoivoizana.
Manome ny Prototype an'ny Maglev ny Magile mankany amin'ny Speed ​​600 mileage isan'ora 23 / 05 / 2019 Nampiditra ny sariohatry ny fiarandalamby maglev i Shina, izay handeha amin'ny 600 kilometatra isan'ora. Ny Maglev dia ampiasaina amin'ny fiarandalamby mandeha tsy misy ifandraisany amin'ny rindrina mampiasa hery enti-hery. Sina Central Television (CCTV), ao an-tanànan'ny faritanin'i Shandong ao amin'ny faritanin'i Shandong, kilometatra 600 isaky ny ora amin'ny fampiasana haingana ny prototype an'ny maglev ao amin'ny seranana fivoriambe. Ny orinasam-panjakana shinoa China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) dia nanangana ilay tetikasa. Nilaza toy izao ny Sansan Chief Engineer Ding Sansan fa ny prototype dia afaka manandrana ireo teknolojia lehibe sy ireo singa teknôlôjiana fototra amin'ny rafitra fiarandalamby fiarandalamby haingam-pandeha. 'STATIC STARTED' tontolon'ny teknolojia ho an'ny fananganana ny prototype ...
1000 Km isan'ora mba hahatonga ny fiaran-dalamby haingana 19 / 06 / 2012 Ny fandrosoana an'i Shina eo amin'ny sehatry ny fitaterana dia mitohy haingana. Ny tanjon'ireo injeniera Shinoa dia ny hanao fiaran-dalamby izay afaka mandeha amin'ny Speed ​​1000 km isan'ora. Shina, firenena be mponina indrindra eran-tany, dia manao fampiasam-bola goavana amin'ny lalamby mba handresena ireo olana amin'ny fitaterana. Raha mihabetsaka ny habetsahan'ny angovo azo avy amin'ny fôsily ary mitombo ny vidin-tsakafo, mitombo ny maha-zava-dehibe ny fiarandalamby elektrôla. Amin'ny tetikasa vaovao nataon'ny Akademia Shinoa sy ny Akademia Sinoa, dia mety hiova tanteraka ny fiheveran'ny fitateram-bahoaka. Araka ny voalazan'ny Beijing Times, ireo injeniera Sinoa dia miasa amin'ny lamasinina izay afaka mandeha amin'ny 1000 km isan'ora. Ahoana no hiasa? Fiaran-dalamby ...
Ny fiarandalamby vaovao nataon'i Samray amin'ny volana Desambra 17 / 10 / 2013 Ny taranja vaovaon'i Samray dia hotontosaina amin'ny volana Desambra: 2010 no rafi-pitaterana lamasinina voalohany ao Samsun. nankalaza ny taonany. Ny rafitra 3 dia nitondra mpandeha mpandeha 3 tapitrisa isan-taona. Ny saran'ny tetikasa dia eo ho eo amin'ny 47 tapitrisa euro, izay tohanan'ny bus 110 sy 16 ary ampiasain'ny Samsun Transportation Inc. Taonan'ny Kianjan'ny Repoblikan'ny Repoblika dia nizara ho an'ny olom-pirenena. Tamin'ny famaritana ny fivalozana, ny mpandeha an-tapitrisany 28 tonga tao amin'ny gara dia nomena voninkazo avy amin'ny sekretera jeneraly lefitry ny tanànan'i Samsun renivohitra, Sefer Arlı. VAOVAO VAOVAO VAOVAO ISAM-PARITRA VAOVAO ARA-PITSARANA ISAM-PARITRA MOMBA ANAY
Hisy trano fitrandrahana vaomiera ao Gaziantep vaovao hatao amin'ny 2020 30 / 12 / 2018 Mehmet Cahit Turhan, Minisitry ny Fitaterana sy ny Infrastructures, izay tonga tany Gaziantep noho ny andiam-pifaneraserana sy ny fifandraisana, nandinika ny asa mitohy mifandraika amin'ny famaranana ny seranam-piaramanidina ao Gaziantep sy ny fananganana ny tranofiara vaovao ary nahazo vaovao avy amin'ny manampahefana. Turhan dia nanao fanambarana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny mpanao gazety taorinan'ny fanadihadiana, ny tranoben'ny Gaziantep Airport New Terminal dia hosokafana amin'ny taona 2020 dia niteny hoe: "Gaziantep dia asa lehibe amin'ny fitaterana ny seranam-piaramanidina ataonay mba hanitarana ny terminal. Ny 6 dia ahitana rafitra vaovao misy bellows fanampiny.
Ny fandaharam-potoanan'ny Tender Railway ankehitriny
Hike fiaran-dalamby haingam-pandeha
Ho avy any Bursa izy ary hijanona eo amin'ilay toeram-panorenana
Ny Super-Fast Train ao Shina Taranja 1000 Mileage Per Hour | lamasinina
Manome ny Prototype an'ny Maglev ny Magile mankany amin'ny Speed ​​600 mileage isan'ora
1000 Km isan'ora mba hahatonga ny fiaran-dalamby haingana
Ny fiarandalamby vaovao nataon'i Samray amin'ny volana Desambra
Hisy trano fitrandrahana vaomiera ao Gaziantep vaovao hatao amin'ny 2020
Ankara Niğde làlana mankany amin'ny 2020
Ny Speed ​​High Line Kayseri dia halefa amin'ny 2020
Mega Transportation Projects ho an'i 2020 ao Istanbul izay kandidà ho an'ny Olympika 2020
Ny tranofiaran-dalamby vaovao ao İzmir dia napetraka tao amin'ny serivisy (Photo Gallery)
Ireo vehivavy tia tanindrazana dia mitandrina tsara rehefa mampiasa baoritra izay mihazona ny tononkalo 70